Iphaneli yokuBuntu, zontathu iintlobo zeepaneli ekufuneka sonke sizazi | Ubunlog
I-Kubuntu inokwenziwa ngokwezifiso kangangokuba akunakulindeleka ukuba sazi kwaye sizinkqaye zonke iindlela esizikhethelayo. Ngale ndlela, isikhumbuza kakhulu Ubuntu ngaphambi kokufudukela kubumbano okanye kwi-Ubuntu MATE yangoku, kodwa ngomfanekiso ononophelo ngakumbi. Ngapha koko, ndingatsho ukuba kulula ukumisela. Into esiza kuthetha ngayo nawe namhlanje ziipaneli ezahlukeneyo zeKubuntu okanye Iphaneli yeKubuntuNgokukodwa kumbindi apho izicelo ezivulekileyo ziboniswa.
Singenza njani ngesiqalisi sesicelo (apha Unazo), ezinophawu lweKubuntu, iPlasma okanye enye ngokuxhomekeke kumxholo okhethiweyo, i Umlawuli womsebenzi Iyafumaneka ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo: Umphathi woMsebenzi, i-Icon-Task kuphela, kunye noLuhlu lwe Window. Ukufikelela kuzo kufuneka ucofe ekunene kwi-bar esezantsi (apho kukho iiapps ezivulekileyo) kwaye ukhethe "ezizezinye", ukhethe enye kwaye ucofe u "Guqula". Ngamnye unemisebenzi yakhe.
Iphaneli yeKubuntu inezinye iindlela kuzo zonke izinto ozithandayo
Umlawuli womsebenzi: yinto ezayo ngokungagqibekanga. Yeyona nto ikufutshane kuleyo ikwiWindows XP okanye Ubuntu MATE, umzekelo, apho kuboniswa ibhanile encinci yensiza enokutshintsha umbala ukuba sikhethe okanye hayi kwaye xa sisenza eminye imisebenzi. Ukuba uninzi luvulekile, baya kulufumba.
Umphathi womsebenzi kuphela ii-icon: yile ndiyisebenzisayo ngoku. Eli candelo liya kuba yinto efana ne-Dock, oko kukuthi, xa sivula iapp, i-icon yayo iya kuboniswa ngesalathiso esingasentla kwayo esibonisa ukuba ivulekile. Kananjalo singazimisa iiankile ukuze zisoloko zifikeleleka. Umahluko ngeDock yokwenyani kukuba asinakho ukubeka usetyenziso, ukuba ekunene yiTreyi kwaye ngasekhohlo sisiQalisi seSicelo.
Uluhlu lwe Window: apha sibona kuphela i icon enye. Xa sicofa kuyo, indawo yolawulo iboniswa apho sibona usetyenziso luvulekile.
Ukuba uyazibuza, ewe ungafumana iDokethi eKubuntu ngaphandle kokufaka nantoni na. Ukwenza oku, yenza ngokulula ipaneli, yenze iziko kwaye ungeze uMphathi weSebenzi eneempawu kuphela. Icala elisezantsi, ewe, kukuba kuya kufuneka sibeke iTreyi kunye nesiQalisi seSicelo kwenye indawo. Kule vidiyo (imfutshane) ilandelayo ungabona ezi ndlela zintathu, ukuba ungatshintsha njani phakathi kwazo kunye nendlela yokuguqula ipaneli endaweni yeDock. Ndiyenzile apha ngasentla ukuba ndingatshintshi nantoni na kuqwalaselo lwendlela endinayo ngoku, kodwa inokwenziwa kuwo onke amacala ama-4 kwesikrini.
Yeyiphi iPhaneli ye-Kubuntu oyithandayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Kubuntu » Iphaneli yeKubuntu, zontathu iintlobo zeepaneli ekufuneka sizazi sonke
Ivenkile ye-Snap iyafumaneka njenge-desktop yeLinux
I-Chob, khangela i-AppImage, i-Flatpak kunye ne-Snap kwiiphakheji